मेराे राेग र उपचारकाे यात्रा – Sadashiva Community (Community of Brahmagyanis)
२०४९ सालमा असार १५ गते देखी स्कुल बिदा थियाे । म त्यती खेर १५ बर्षकाे थिएँ हाेला । त्यतिबेला मलार्इ ज्वरअाउने हुन्थ्याे ।त्याे ज्वर १०३ देखी १०७ डिग्री सम्म पुग्थ्याे । त्यसाे हुँदा पाेखरामा डा. कुमार समशेर कहाँ त्याएका थिए । त्यसबेला मलाइ टाइफाइटभएकाे थियाे भनेर भनेका थिए । र अाैषधी ३ महािना सम्म १००० एमजीकाे अाैषधी खाँदापनि ज्वर घटेन । ज्वरमा म बर्बराउथेँ । म अाफुलाइ बाँच्चु जस्ताे लाग्दैनथ्याे । तिन महिना बिरामीहुँदा मेराे हड्डी छालामात्र बाँकी थियाे । मै डा. कुमार समशेर कहाँ पटक पटक लैजादा पनि हब घरै लैजाउ भन्नु हुनथ्याे याे बाहेक अरू अाैषधीले छैन भन्ु हुन्थ्याे । खाना खान सक्दैनथेँ ।र मलार् चम्चामा पानि खुलाउथे तिन महिना सम्म । त्घयस बिरामी भएकाे बेलामा घरमा मलाइ बाबुअामा, दाजुभाइ ले कुरेर बस्थे कसनकी मलाइ भुतहरू लिन अाउथे । मैले ति भुतहरूलाइ देख्थे तर त्यहा उपस्थित अरू मानिसहरूले ति भुतहरूलाइ देख्दैनथे । यसरी बिरामी भइरहेकाे र मलाइ भुतहरूले लसन अाउछने भनेर भन्ने गरपछि दाइ बुबाले लामा बाेलाएछन् । लामालाइ अछयता देखाउन थाले । म बस्न नसकेर दाइ भाइले समातेर अडाएर राखेका थिए । लामाले दिउसाे ४बजे देखी सुरूगरेकाे थियाे । चरसकाे थालमा एक अाङ्राखाेरा पानीराखेर अाङ्खाेरा त्यस थालमा घाेप्ट्याएर त्यस अाङ्खाेरामा चारतिर बत्तिबालेकाे थियाे । पानि उम्लान थाले पछि बाेक्सी लागेकाे रहेछ भन्न थाले त्याे लामाले । त्यस लामाले याे बाेक्सी कडा रहेछ भनेर अर्काे लामालाइ पनि काेलाएर ल्याएकाे थियाे । राती नाै बजे तिर म मा बाेक्सी बाेल्न थाल्याे । बाेक्सी बाेल्दा मेराे माइजु भएर बाेल्न अाएकाे थियाे । बाेल्ने क्रममा हिजाे खान्छु भनेकाे खान सकिन भाेली जसरीभए पनि बहुरूपी लगाएरू भएपनि खान्छु भनेर भनेकाे थियाे । पहिला लामाले फकाउदै थियाे पछि बाेक्सी ले बाेल्न नमाने पछि पिट्न थाथ्याे , म बाेक्सी भएर तिनिहरू सँग लड्न थालेँ । ए क छिन अगाडीसक्क मलाइ अरूले समातेर धानेका थिए मैले बाेक्िप बनेर ति सबै सँगलड्दै थिएँ । म लाइ धान्न पर्दैनथ्याे, त्यहाँ वर पर भइका ले सबैले मलाइ पिट्न थाले । सबैले पिटे । पनियाे तताएर राताे बनाएर गालामा हान्छु भनेकाे थियाे । अरूले हानेकाे थियाे भन्छन् मैले भने हानेकाे देखेकाे थिइन । अरू कुराकानीहरू अलि अलि याद हून्थयाे तर अाफुले अाफ्नाे शरीर चलाउन सकेकाे छैन अरूले अाफ्नाे शरीर चलाइराखेकाे छ भन्ने लागिरहेकाे थियाे । अागाेमा खुर्सानी डडाएर सुध्न लगायाे ।पछि त्यस बाेक्सीलाइ याे बच्चालाइ छाेडभनेर बाचा कबल गराउन थाले । त्यस पछि त्यस बाेक्सी भन्नेले छाेड्छु छाेड्छु भन्याे । लामाले बाती माेटाेेबनाएर बत्ति बालेरमुख अाँ गर्न लगाएर खान लगायाे । मैले त्याे बलिरहेकाे बत्ती खाएँ । मलाइ लामा काे पैताला चाट्न लगायाे । त्याे बाेक्सी भएर मैले लामाकाे पैताला चाटेँ मलाइ पनि याे याद छ । दुइटै लामाकाे खुट्टामा ढाेग गर्न लगायाे । लामाले खुकुरी ल्याएर त्यसमा पुजा गरेर त्यस बाेक्सीलाइ अबदेखी कहिल्यै अाउदिन भनेर कसम खान लगायाे ।
केही महिना बिते पछि मैले ब्रह्मकाे अनुभव गर्ने माैका मिल्याे । त्यसकाे करिब ३ महिनापछि सदाशिवकाे अनुभव गर्ने माैका मिल्याे ।
Author krishnamayashthPosted on July 14, 2017 July 14, 2017
Previous Previous post: कुराकाे चुराे
Next Next post: मेराे अनुभव र समाधान